DF Somalia oo ay fursadi soo martay markii ay Qadar go’doomiyeen dalal ka tirsan Khaliijku | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DF Somalia oo ay fursadi soo martay markii ay Qadar go’doomiyeen dalal...
DF Somalia oo ay fursadi soo martay markii ay Qadar go’doomiyeen dalal ka tirsan Khaliijku
(Hadalsame) 01 Okt 2021 – Siyaasaddu hay’ad samafal ma aha, waa dano la kala beddesho, kanaan ku siiyey, kanna waa qaatay. Tusaalayaal baan sheegi:
Markii Dawladda Qatar la go’doomiyey, oo cir iyo dhul iyo bad laga xirtay, Turkigu waa u gurmadey, waa taageeray, ciidan buu geeyey, badeecadduu u daabulay, sucuudi & imaaraad buu ku waayey.
Laakiin Turkigu muxuu beddel helay? Waxaa ka mid ah: Qatar wexey maal gashatay turkiga 2019 in ka badan $22 bilyan, waxaa dhismaha qatar ka shaqeeya 500 shirkadood oo turki ah iyo shaqaalohooda.
2020-dii Qatar wexey saddex jibbaartey xoojinta dhaqaalaha turkiga oo gaarsiisey $15 bilyan. Riyaalka ayey Liirada ku xirtay. Isla sannadkaa booqashadii Amiirka Qatar, wexey la saxiixatay 10 heshiis, oo ay ka mid tahay in Qatar iibsato 10% suuqa saamiyada turkiga ee (Istanbul stock exchange).
Qatar wexey kaloo yeelatay (49.9%) wershedda dabbaabadaha iyo baabuurta gaashaaman. Badeecadda turkidu u dhoofisey Qatar $1.4 bilyan, iyo faa’iidooyin badan oon ka gudbey.
Soomaaliya inta Turkigu taageeray Qatar in la mid ah ama ka badan ayey taageertay, go’doomintii wey u hiilisay, sucuudi iyo imaaraat iyo masar ayey ku weydey, hawadeeda ayey diyaaradaha qatar u furtay (hal maalin 15 duullimaad).
Waxaa se la is weydiinayaa: Mexey soomaaliya ku beddelatey oo muuqda? Waxaan xogta ku haynnaa Qatar iney wax walba diyaar la ahayd lana tahay, haba yaraateena eed ku lahayn, $10 bilyanna koob shaaha uga fududahay.
Allaha u siyaadiyo, laakiin jawaabta akhristahaan u daayey.
Previous articleCillado & cudurro laga qaado qofka oo iskaabulannimada ku yara daaha
Next articleDHEGEYSO: Sweden oo isku haysata kaalmo la siiyo ururro ay ka mid yihiin QM, Bankiga Adduunka iyo qaar kale